किन आफ्नो विवाहमा बेहोस भएका थिए ऋषि कपुर ? यस्तो छ कारण ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
५ बैशाख २०७९, सोमबार ००:००
बलिउडका स्वर्गीय अभिनेता ऋषि कपुर र नितू कपुरको जोडी बलिउडका एभरग्रीन जोडीको सूचीमा समावेश रहनेछ । रणबीर र आलियाको विवाह अघि आज हामी तपाईंलाई नितू कपुर र ऋषि कपुरको विवाहसँग जोडिएको एउटा रोचक जानकारी सुनाउँदैछौँ ।
ऋषि कपुर र नितू कपुरजस्तै अब आलिया भट्ट र रणबीर कपुर पनि प्रेमको एउटा नयाँ कथा लेख्दैछन् । यी दुई छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाँधिएर आफ्नो प्रेमलाई अर्को नाम दिनेछन् ।
रणबीर कपुरका पिता ऋषि कपुरले फिल्म बबीबाट बलिउडमा डेब्यू गरेका थिए । यो फिल्मपछि अभिनेता रातारात स्टार भएका थिए । ऋषि कपुरको चार्मिङ पर्सनालिटीले थुप्रै युवतीको मन जितेको थियो ।
तर ऋषि कपुर नितू कपुरसँगको प्रेममा परे । ऋषि कपुरले जब नितूलाई डेट गर्न सुरु गरेका थिए तब उनी एक सफल अभिनेता थिए । यी दुईको सम्बन्ध निकै विशेष थियो । ऋषि कपुर र नितू कपुरले २२ जनवरी सन् १९८० मा विवाह गरेका थिए ।
विवाहको दिन बेहोस भएका थिए ऋषि कपुरः
कपुर खानदानको यो विवाहमा देशका साथै विदेशका थुप्रै चर्चित हस्ती पनि समावेश भएका थिए तर यसैबीच केही यस्तो घटना घट्यो कि सबैजना आत्तिए ।
एक अन्तरवार्ताका बेला नितू कपुरले विवाहका बेला आफू र ऋषि कपुर बेहोस भएको बताएकी थिइन् । यद्यपि, दुईजना बेहोस हुनुका कारण भिन्न भिन्न थिए ।
नितू कपुरले आफ्नो अन्तरवार्तामा यो किस्साबारे जानकारी दिँदै भनेकी थिइन्, ‘म र ऋषि कपुर हाम्रो विवाहमा बेहोस भएका थियौँ । मेरो लेहेङ्गा असाध्यै भारी थियो र विवाहमा असाध्यै धेरै मानिसको उपस्थिति थियो । मेरा लागि यो सबै सहन मुश्किल भएको थियो । मेरा श्रीमान् ऋषि कपुर मानिसको भीड देखेर बेहोस भएका थिए । ऋषि कपुर घोडा चढ्नु अघि बेहोस भएका थिए । पछि हामी ठिक भएपछि मात्रै हाम्रो विवाहको कार्यक्रम सुरु भयो ।’
प्रकाशित मिति: Apr 18, 2022